I-137 YOYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA (IMIFANEKISO YEETUB KUNYE NEMIBONISO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela I-137 yoyilo lweGumbi lokuhlambela (Imifanekiso yeeTub kunye neMiboniso)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela sezimvo zoyilo lwegumbi lokuhlambela. Apha ngezantsi kukho iintlobo ngeentlobo zoyilo zangaphakathi ezinendawo yangasese, yanamhlanje, yendabuko kunye neendawo zokuhlambela zodidi. Le yinxalenye 1, yegalari yemifanekiso emi-3. Cofa apha ukuze ufumane Uyilo lweNdlu yangasese eNtofontofo Icandelo 2 kwaye Uyilo lwegumbi lokuhlambela Icandelo 3 Amagumbi okuhlambela aboniswe kweli phepha anemibono ngabaqulunqi bangaphakathi abaphezulu ngokugxininisa kwiziphelo eziphezulu ezinje ngetayile yesiko, iibhafu ezinkulu zokuntywila, kunye nemvula emanzi.
Igumbi lokuhlambela lelinye lamagumbi asetyenziswa ngokubanzi ekhaya. Ngokutsho koqikelelo lwamva nje lweRealtor Magazine, ukulungiswa kwendawo yokuhlambela kunokuzisa amaxabiso aphezulu ekubuyiseni xa uthengisa. Indawo yokulungisa igumbi lokuhlambela inokubuyela kwiipesenti ezingama-75 zeendleko zokulungiswa kwakhona. Ngesi sizathu akukho zininzi zisezantsi zokulungisa kwakhona igumbi lakho lokuhlambela ukuze wenze amava obumnandi owathandayo. Funda ngakumbi malunga Iingcamango zokuhlaziya Apha.
Ngaphandle kobuhle bezi mini kwigumbi lokuhlambela eliboniswe apha ngasentla, ligcina iklasi kunye nobuhle ngokukhetha kwayo izinto kunye nemibala, kunye nokwakheka okugqwesileyo. Ilitye lendalo elikhazimlisiweyo lihombisa imigangatho, ngelixa iindonga zineepaneli ezithe tyaba, zongeza iphethini elula kunye nokuthungwa kwisithuba ngaphandle kokuxinana kakhulu. Embindini ibhafu ekhethekileyo enesimo esingaqhelekanga, esenziwe ngelitye lendalo elihambelana nomngxunya welitye lesinki. Ngubani ongafuniyo ukungena kule bhafu intle ngelixa uphumle kubunewunewu obupheleleyo.
Iingcamango zokuhlambela ngegumbi lokuhlambela
Le ndlu yangasese ngumxube onomdla woyilo lwangoku kunye nolweetropiki. Iwindow enkulu ejonge elwandle apho ibhafu ikhoyo yinto yokubona, kwaye ukuphucula imeko yendalo, yobume bendalo, ukugqitywa ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela kusebenzisa umxube wezinto zendalo. Imigangatho ngumbala othambileyo we-beige, ngelixa iindonga zihonjiswe ngephepha lodonga lengca, ukongeza ubume bendalo obuhle kwindonga. Ukongeza umahluko ngakumbi, uya kubona ucango kunye neefestile ezinesiphelo somthi esimnyama ukuseta umbala okhanyayo wendalo.
Le ndlu yokuhlambela inkulu ithatha ubunewunewu ukuya kwelinye inqanaba ngokufaka indawo yomlilo ngaphakathi. Imigangatho ihonjiswe ngamatye endalo apholileyo obutofotofo, aneendonga ezingatyhilelwanga ukufuma ezombathiswe ngephepha lodonga elihle. Ukongeza kwivali yaseburhulumenteni yegumbi lokuhlambela, inombhoxo omkhulu wesazinge kumbindi, kunye nokubumba okupeyinti okumhlophe ukongeza kwisiphumo.
Le ndlu yangasese yindawo yokuyila yanamhlanje kunye noyilo lwetropiki. Igumbi lokuhlambela livula igadi encinci epokothweni yangaphandle kunye nendawo enomdla kakhulu ngaphandle, kwaye ngaphakathi, ibhafu enkulu ime kwiqonga elenziwe ngamaplanga. Indawo eseleyo yokuhlambela ilula kwaye iluncedo - iindonga ezingenanto, ilize eludongeni-oluxhomekeke kwinto engekhoyo, isipili esenziwe ngamatye. Udonga olukufuphi nebhafu luzama ukuzisa umphandle ngaphakathi, njengoko lusebenzisa amatye okugqibela endalo nawo ayesetyenziselwa indawo yokuhlambela ngaphandle.
Eli gumbi lokuhlambela linika imvakalelo entle enkulu, njengoko ibekwe kwiwindows kwaye iphakanyiswe kwiqonga eliphakamileyo eligutyungelwe ziithayile zegranite ezintle. Inokude inee-accents ze-capiz mosaic tiles, ukongeza kubuhle kunye nobukhulu bebhafu / jacuzzi. Ngasekunene yindawo evaliweyo yeshawari, eyenza indawo ebonakalayo, njengesiqhelo, iindawo zokuhlambela zahlulwe kuphela kwigumbi lokuhlambela ngezahlulelo zeglasi.
Eli gumbi lokuhlambela linika indawo evulekileyo nevulekileyo kunye nophahla lwayo oluphezulu kunye neefestile ezinkulu kwiiphaneli ezimhlophe ezijonge ngaphandle. Ibhafu emhlophe yokuhlambela ilele ecaleni kweefestile, kwaye ijonge ngqo kwipateni egoso ngombala omdaka phakathi komgangatho okhazimlayo. Ukuprintwa okumdaka kudibanisa ukugqitywa kwe-mahogany enzulu yeekhabhathi ezinde kumacala omabini ale ndawo yokuhlambela.
Ukugqitywa ngumbono oqaqambileyo wolwandle, igumbi lakhe lokuhlambela liphumeza ngokugqibeleleyo ukubukeka kwe-zen yanamhlanje. Umbono wendalo kunye namakhethini amhlophe athambileyo adala ukuthomalalisa kunye nokuthomalalisa kunye nefuthe, ngelixa izivalo zamaplanga zinceda ukugcina imfihlo, kwaye kwangaxeshanye zivumela ukukhanya kwendalo kwisithuba. Ibhafu ibekwe ngokugqibeleleyo embindini wesithuba, kwindawo ekhehliweyo yomgangatho kwaye ijikelezwe ngamatye amhlophe emvelo okuzisa ngaphakathi ngaphakathi. Ibhafu ngokwayo yenziwe ngezinto zomphezulu eziqinileyo, ukunika imbonakalo yanamhlanje engenamthungo.
Amagumbi okuhlambela ahlala ehlamba ngokukhawuleza okanye iimpahla zitshintsha, kodwa le ndawo yokuhlambela inika ukuphumla kunye nokunye okuninzi. Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo linecandelo elingqingqwa elibambe iifestile ezinkulu kwiiphaneli ezimhlophe, kunye nebhafu enkulu emhlophe embindini wayo. Kukho iikhabhathi eziphakamileyo kwiilaminates ezimhlophe eziqinileyo ecaleni, ngelixa imigangatho igutyungelwe kwiithayile ezinkulu ezimhlophe ezimhlophe. Kwicala, isitulo esinokuhlala umntu esinye esimhlophe esenziwe ngelaphu elimhlophe siphambi kwesipili esikhulu, apho umntu anokukhululeka ngakumbi emva kokuhlamba.
Isilingi ephezulu kakhulu inceda ukunika le ndawo yokuhlambela umbono wokuphakama kungekuphela kobude, kodwa nobungakanani ngokunjalo. Yindumasi esemagqabini yemathiriyeli yendalo kwaye igqibile, yenza ubumbano lomanyano lwendalo kunye nolwanamhlanje. Isithuba sinokukhanya kwendalo okuninzi okungena ngeefestile zaso, ukuphucula ngakumbi ukujongwa kwendawo. Imigangatho ifakwe iiplanga zomthi we-teak onganyangekiyo kwimozulu, ohambelana nomthi osetyenzisiweyo kwilize. Ukuqhubeka kweepateni ezithe tyaba zeeplanga zomgangatho weplanga ziithayile zelitye zeTravertine ezihonjisiweyo ezindongeni, zonyusa ukuziva kwendalo kwigumbi lokuhlambela.
Uyilo olulula kakhulu lokuhlambela ngokulungelelanisa kakuhle kunye nokudityaniswa kwezinto kunye nokugqitywa. Iindonga, imigangatho kunye namacala ebhafini avalwe ngethayile efanayo enombala wepesika kwisiphelo se-satin, isinika ukuthungwa. Udonga olujongene nesipili kwelinye icala, lisebenzisa iithayile zokugqiba zentsimbi, zinika indawo indawo yokubhenela kwimizi-mveliso. Kukho udonga olucocekileyo olumhlophe oluxhonywe eludongeni olubekwe kufutshane nebhafu yokuhlambela, indawo ebiyelweyo yeglasi, isibane esibhakabhakeni kunye nesicwangciso sokuhombisa ngaphakathi ukugqibezela inkangeleko.
Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela ezijolise ekusebenziseni umgangatho omnye kunye nodonga lwethayile ngokungaguqukiyo kunokuthintela ukunqunqa igumbi lokuhlambela kunye nokudala imvakalelo evuyisayo. Sebenzisa iithayile ezifanayo emgangathweni nasezindongeni ikwangumbono olungileyo kumagumbi okuhlambela amancinci ukudala inkohliso yendawo enkulu. Ngokusebenzisa umbala we-tile okhanyayo unokunyusa ukuziva ngokubonakalayo. Ukuzisa umgca wokungafani kunye nombala kwisithuba, gxila ekongezeni ukuhonjiswa okanye izixhobo ozithandayo.
Igumbi lokuhlambela linobuhle obufana ne-spa. Ukudityaniswa kwemibala kunye nokugqitywa kuyinika isibheno sanamhlanje sase-Asiya- imigangatho emnyama yeplanga, ucango kunye neefestile, ezidityanisiweyo kunye nokugqitywa kodonga. Ibhafu ikwisimo esikhethekileyo seembotyi esenziwe nge-quartz, isinika isibheno esingenamthungo kunye nokuthungwa okuncinci. Umbono wangaphandle kunye nesibane sependant esongezwa kwisibheno esingaphezulu kwayo yonke le ndawo yokuhlambela.
Le ndlu yokuhlambela inika ilizwe vibe kunye nezinto kunye nee-aksenti ezikulo. Umgangatho uhlanganiswe ngeethayile ezimdaka ngeepateni ezincinci ezimhlophe zedayimani, ngelixa uninzi lwegumbi ligutyungelwe ngamanqwanqwa enziwe ngamaplanga kunye neepaneli. Iitafile zigutyungelwe kudidi oluphezulu kunye nelitye elimhlophe elingenamthungo elimhlophe, ngokufanayo neplanethi ebonakala ngathi iqonga elibambe ibhafu emhlophe. Iifestile zejali kunye nezityalo ezenziwe ngombala oluhlaza zezona zinika le ndawo yokuhlambela ukuziva kwayo.
Igumbi lokuhlambela lanamhlanje elinoyilo loyilo. Ukugqitywa okusetyenzisiweyo kule ndawo yokuhlambela kuyinika imbonakalo yoshishino kakhulu - udonga lokugqitywa kwekhonkrithi, iithayile ezimnyama ezingaphantsi komhlaba. Ezi zidityanisiwe kunye nokugqitywa kobumnyama obumnyama kwisinki engelutho, iglasi enombala obomvu wokwahlula ishawa kunye neTeak yokucheba iinkuni kwindawo yeshawari. Ngaphandle kokugqitywa ngombala omnyama, ifestile enkulu kakhulu yemifanekiso ivumela ukukhanya kwelanga kwendalo kwisithuba, ukuyinceda ibonakale ikhanya ngakumbi kwaye inomdla ngakumbi.
Le igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo elinamagumbi amabini okuhlamba. Enye yazo ikwindawo eyahlulwe ngokwesiqingatha kwaye ibekwe kwiqonga eliphakanyisiweyo elijikelezwe ziithayile zecaramic ezinombala o-orenji. Oku kubekwe ecaleni kwefestile enkulu. Elinye ibhafu likwelinye icala lokuhlambela, kwaye luhlobo lokuma simahla sebhafu yokuhlambela. Phakathi kweetyhubhu ezimbini kukho indawo enkulu evulekileyo enee-ceramic ezimhlophe ezimhlophe ezinee-aksenti zomda weorenji kunye neqhosha elihle. Isinki engelutho ibekwe kule ndawo isembindini.
Le ndlu yangasese yanamhlanje inokudibanisa okuhle kunye nokulula kwemibala kunye nokugqitywa. Iindonga zipeyintwe ngombala we-beige othambileyo, ukugcwalisa iithayile ze-beige travertine ezisetyenziswa phantsi nakwisiqingatha seendonga. Ibhafu yokuhlambela ibekwe embindini wegumbi lokuhlambela kwiqonga eliphakamileyo, kwaye lenziwe ngomthi wokugqiba i-PVC. Ukubekwa kwebhafu kubangela ukuba ube nembono entle ngaphandle.
Le yindawo yokuhlambela elula ebekwe ngobuchule kufutshane negadi encinci yangaphandle. Iifestile ezinkulu kwigumbi lokuhlambela zivumela umsebenzisi ukuba abone umbono wegadi, ukudala imeko yendalo kunye nokuphumla. Kule foto, uza kubona ibhafu yokubhabha engqongwe lilitye elikhethekileyo eligudileyo elinamathoni aluhlaza namdaka alungileyo, ahambelana ngokugqibeleleyo nemifuno yegadi. Indawo yeshawari yahluliwe kodwa ayinayo indawo ebiyelweyo yokuhlamba. Inebhentshi encinci, intloko yeshawari yemvula eqhotyoshelwe eluphahleni kunye neseti eqhelekileyo. Iithayile zilula beige elula kuyo yonke indawo yokuhlambela.
Le ndlu yangasese ikhupha ubuhle bale mihla kunye negumbi layo lokuhlambela elinombhalo nje. Igumbi lokuhlambela libanzi, linemigangatho yeethayile ekhazimlisiweyo kunye nodonga olunemifanekiso eqingqiweyo. Kukho into engento ephindiweyo enkulu eneekhabhathi ezimhlophe, i-jet black granite countertop kunye nesakhelo esingaphantsi kwesakhelo ububanzi obufanayo nobungamampunge. Ibhafu ibekwa kwiqonga eliphezulu elijonge elwandle.
Le ndlu yangasese yangoku idibanisa izinto ezilula nezintle ukufezekisa oku kujongeka. Kukho ibhafu yokuma yasimahla kwicala elinye kunye neshawari evaliweyo kwelinye icala lokuhlambela. Imigangatho kunye neendonga zisebenzisa ilitye eligudisiweyo ngombala okhanyayo. Indawo yamampunge eyakhelwe-ngaphakathi inendawo yokulinganisa enamatye kwilitye elikhethekileyo elingwevu ekugqityweni kwesatin. Kukho indawo encinci yokugcina iitawuli kunye nezinye izinto zokuhlamba ecaleni kwento engento, kwaye uya kubona ukuba igumbi lokuhlambela lisebenzisa izibuko ezininzi ukubuyekeza ubungakanani bayo.
Le yigumbi lokuhlambela elilula kakhulu eliya kuphumla. Ibhafu yokuhlambela emileyo ibibekwe ecaleni komnyango wokutyibilika oya echibini elincinci labucala elingaphandle. Ibhafu yokuhlambela yenziwe ngelitye le-quartz elinombala onepeyinti enobume obukhethekileyo. Ngelixa igumbi lokuhlambela lisebenzisa iithayile kwisiphelo esifanayo kunye nombala webhafu yokuhlambela, indawo ejikeleze ibhafu isebenzisa ilitye elimnyama elimnyama kwaye lijikeleze ibhafu yokuhlambela ngokwayo ngamatye omlambo amhlophe.
Le yangasese yangoku isebenzisa indibaniselwano yombala elula kwaye igqibile ukufezekisa oku kujongeka. Iindonga zinxitywe ngeethayile ezimnyama ezenziwe ngombala, imigangatho yentsimbi yeyokugqitywa komthi weTeak. Iithayile ezingwevu zeendonga ziyahambelana nombala weefestile zeefestile ngokunjalo. Kuba igumbi lokuhlambela lincinci, akukho hlulo phakathi kwebhafu yokuhlamba kunye nendawo yokuhlamba.
Le ndawo yokuhlambela idibanisa ilizwe kunye nelala maxesha, njengoko idlala ngezinto ezenziwayo kunye nokwahlulahlula. Iindonga ezingaphezulu zigqunywe ziithayile zangaphantsi ezimnyama ezixande ezilinganayo, ezilingisa iipateni zezitena. Indawo encinci yebhafu kunye neshawari iphakanyisiwe kumanqanaba amabini kwaye yahlulwe ngeglasi ebonakalayo. Zombini zigqunywe ngamatye emarble aqinileyo ukusuka kumgangatho osezantsi ukuya kwinxalenye yeendonga, kunye nokwahlula phakathi kwendawo esinki kunye nebhafu. Iikhabhathi zinamabala wengue, necwecwe lokucoca ilitye lemabhile kunye nezipili ezinkulu. Izityalo zihombisa lo msebenzi wobugcisa kwigumbi lokuhlambela.
Le yindawo yokuhlambela efanelekileyo yeTropiki ngokudibanisa imibala, izinto kunye nezinto ezenziwe kakuhle. Uza kubona i-medley yamatye kunye nemithi, ukudibanisa ngokuvisisana ukufezekisa oku kujongeka. Igumbi lokuhlambela lingaphandle ngaphandle, ligqunywe zii-eaves ezongezelelweyo ezenziwe ngoqalo. Iindonga ezisecaleni kwendlu zinezinto zokombiwa kwamatye endalo, ngelixa udonga lwecala elisecaleni lisebenzisa amatye asikiweyo endalo, ayinika uburhabaxa obukhulu. Imigangatho kulula ukuthulula ikhonkrithi ngamatye omlambo. Unokubona kwakhona ukusetyenziswa kwebhentshi yeTeak, amampunge kunye noqalo.
Uyilo olwahlukileyo kunye nokudityaniswa okugqwesileyo kwemibala enendawo enkulu kakhulu kwenza le ndawo yokuhlambela ifaneleke kwigumbi lehotele elingeneyo okanye ikhaya elinobunewunewu okanye indlu yokuhlala. Indawo isetyenziswe kakuhle, yahlula indlu yangasese, ishawa kunye nebhafu yokuhlambela enye nenye inezahlulelo zodonga olupheleleyo.
Le ndlu yokuhlambela intle kwaye intle ibonakala ngathi ivela ngqo kwindlu yonodoli. Ngaphandle kwamakhethini amafutshane egolide aneefrills. Igumbi likuwo wonke umhlophe onemibala eyahlukeneyo kunye nokuchukumisa iglasi. Umgangatho kunye neminye imiphezulu igutyungelwe ngamatye emhlophe emhlophe, kunye nekhabhathi emhlophe eqinileyo eneepaneli ezilula. Iipili zilayishe icala letafile, ngelixa iifestile ezibheke ngaphandle zingafunyanwa kwicala lebhafu.
Le ndlu yokuhlambela encinci nenhle ine-oatmeal enemibala enemigangatho yethayile, njengodonga. Ibhafu yokuhlambela igutyungelwe liqonga eliphakamileyo eligcwele iithayile zemibala ecaleni, ngelixa lineetayile ezifanayo ezinombala we-oatmeal ngaphezulu. Iimpawu ezimbini zezibane zikhanyisa indawo ngokuchukumisa i-tangerine kumakhethini nakwizandi.
Igumbi lokuhlambela elihle ligal kukukhanya okuqaqambileyo. I-chandelier ixhomeke phakathi kwesilingi, efana nokukhanya okufumaneka kumacala omabini esipili, kunika ukukhanya okuhle njengoko kufuneka. Iindonga zikumbala wombala wekofu, ngelixa iingcango, iintsika ezijikeleze ibhafu yokuhlambela, kunye nekhabhathi zinamabala wengue. Umgangatho womnyango wegumbi lokuhlambela, kunye neqonga eliphakamileyo elibambe ibhafu yokuhlambela ifakwe iithayile zedayimane, ehonjiswe ngedayimani ezincinci zegolide.
Le ndlu yokuhlambela incinci ixuba okwangoku nendalo ngokudlala ngemibala kunye nokuthungwa. Phakathi komgangatho kukho ibhafu yokuhlambela ejikelezileyo elele ngqo ngaphezulu komgangatho wethayile emdaka ngombala, echazwe ziithayile ezenziwe ngombala. Elinye icala ligutyungelwe ngumthi oqinileyo we-oki egolide, ngelixa elinye icala line-tiles ezintle eziluhlaza. Umnyango wegumbi lokuhlambela ugqunywe yiminyango yeglasi kunye nekhethini yokubona emhlophe kwaye ikhokelela kwiqonga elijonge elwandle.
Le ndawo yokuhlambela ikhanya ngobuhle bayo ngombala wegolide. Umgangatho ugcwele iithayile zamatye ezikwere egolide kwisiphelo esimenyezelayo, ngelixa iipaneli zebhafu kunye nenxalenye esezantsi yegumbi lokuhlambela ukunqanda amanzi ekuchithekeni ukuya kwigumbi lokuhlambela lonke zihambelana neethayile zamatye eziziingxande zegolide ekugqityweni kwamatte. Ubukhulu bucaciswa ziipatheni ezibanzi kwiimfono zegolide. Iigolide zithotywa phantsi ngamatye amnyama aqinileyo ajikeleze ibhafu, kunye neekhabhathi ze-mahogany.
Le ndlu yokuhlambela inombala we-oatmeal, kodwa isebenzisa ubume, i-gloss, kunye nezinto zendalo ezivela kwibala eliluhlaza ngaphandle kunye ne-mahogany laminates yomthi phantsi ukuze yenze indawo entle nenqabileyo yokuhlambela Ibhafu ilele embindini wegumbi elinethayile kaMoses ejikeleze icala kunye nomphezulu omhlophe oqaqambileyo phezulu. Kanye ecaleni kwayo kukho isitulo sokuphumla esine-mahogany yesakhelo somthi kunye nokuhombisa i-oatmeal upholstery. Amacala enziwe ukuba asebenze ngesinki kunye neekhabhathi ezisekunene kunye netafile enesihlalo esidibeneyo sokuthambisa i-oatmeal upholstery kunye nesipili kwelinye icala, indawo efanelekileyo yokwenza i-makeup kunye neerejimeni.
Igumbi lokuhlambela elibanzi linelizwe lokuphumla elinalo. Ikhabhathi enzulu ye-walnut ene-stool ehambelana nayo igcwele amatye e-coffee aqinileyo agubungela i-countertop, kunye nomphezulu weqonga lamanqanaba amabini eligcina ibhafu. Uninzi lwodonga ligqunywe ngephepha lodonga elimdaka ngombala, ngaphandle kwendawo yamatye emdaka eludongeni lwendawo yokuhlamba. Ibhafu emhlophe yona ihambelana ngokugqibeleleyo nesinki emhlophe kunye neefestile zeefestile ezijonge kweso sixeko sixakekileyo. Amakhethini amhlophe ongezelela ukongeza ubomi kwindawo enkulu emdaka.
Le yangasese yanamhlanje igqunywe ziindlela ezahlukeneyo kunye nemibala yomhlaba. Isinki yegolide kunye nompompo ubekwe kwithala lamatye eliqengqelekileyo eligcwele iithayile zamatye kunye namatye angwevu. Iindonga zigutyungelwe ngeethayile zamatye eziziingxande kunye nezematte, apho isipili esikhulu siqhotyoshelwe khona, singqongwe ziithayile ezixande ezibhityileyo. Indawo yokuhlamba ifakwe ngaphakathi kwiipaneli zeglasi ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuya eluphahleni, apho intloko yeshawa inokufunyanwa khona.
Le ndlu yokuhlambela intle inethayile emhlophe kunye nezikwere ezincinci ezimnyama. Ubume obufanayo busetyenziselwa iqonga lamanqanaba amabini abambe ibhafu ebheka amasimi aluhlaza ngaphandle. Iiphaneli ezimhlophe zeefestile zirhangqwe ziipateni eziluhlaza ezikwakha isipili ngaphezulu kwetafile ye-walnut kunye nesihlalo esincinci esidityanisiweyo kwimpahla emnyama.
Esi sisiseko sokuhlambela ngaphandle esine-spa esinjenge-Asia zen isibheno. Ukudityaniswa kwemibala kunye nokugqitywa, kunye nokusetyenziswa kwezityalo kunesiphumo sokuthomalalisa, kwaye kunika isibheno esicocekileyo ngokwenyani kunye nemvakalelo yokuba yeyendalo. Imigangatho ziitayile zelitye ezipholileyo ezinyukayo zide ziye kudonga lokwahlulahlula. Iithayile ezifanayo zazisetyenziselwa i-twin sink vanity ethi isitya setye esikhethekileyo. Kwangokunjalo, isitya esima simahla senziwe ngamatye, nangaphandle elirhabaxa, ukugcwalisa amatye omlambo agxothiweyo abekwe ejikeleze ibhafu.
Le ndlu yokuhlambela inika indawo ebanzi ngokwahlulahlulwa kube ngamacandelo ngeengqameko. Indawo yokuhlambela ilele kwelinye icala lomnyango, ngelixa ibhafu ibelele kwenye. Isinki kwelinye icala, ilele ngapha komnyango, ngaphezulu kwekhabhathi yeplanga ye-mahogany, kwaye kanye ecaleni kwesipili. Indawo yeshawari ineqonga eliphakame kancinci, kwaye lifakwe iithayile ezimdaka ngombala kumgangatho wayo, eyahlukileyo kwiithayile ze-matte oatmeal kuwo wonke umgangatho wokuhlambela. Indawo yokuhlambela kwelinye icala ifana negumbi lokuphumla, iqonga elinamanqanaba amabini liphethe isitulo esincinci esenziwe ngegolide, sihleli ecaleni kwebhafu. Amakhandlela, izityalo zokuhombisa, ikhethini emhlophe, kunye nefreyimu yefestile ejonge kwimifuno ngaphandle inika igumbi ilizwe lalo elikhethekileyo.
Le ndlu yangasese yanamhlanje ifumana ubuhle bayo kwisitayile sayo esincinci. Izinto ezenziwe ngomthi ezinemibala eyahlukeneyo kunye nemvakalo yokuhombisa eli gumbi, ngokuchaseneyo neendawo ezimhlophe ikakhulu. Iikhabhathi ezinamabala e-Wengue zijikeleze itafile enkulu emhlophe eqinileyo egcina iisinki ezi-2 kwaye ilele kanye ecaleni kwesipili esikhulu sodonga. Ekupheleni kwayo, ibhafu emhlophe egutyungelwe ngesakhelo somthi we-oki ilele ecaleni kweefestile zeglasi ezinkulu ezibheke ngaphandle.
Uninzi lwembono yoyilo lwegumbi lokuhlambela lizama ukufihla indlu yangasese ngaphandle kwamehlo ngasemva kodonga okanye kwigunjana lamanzi. Indlu yangasese engentla igcinwe kwigumbi elijikelezwe ziindonga ezimhlophe, njengendawo yeshawari nayo ekhutshelweyo, kodwa ngeli xesha ineepaneli zeglasi.
Le ndlu yokuhlambela intle kunye neyasetyhini idlala ngobomvu kunye nomdaka ukugxininisa indawo emhlophe kakhulu. Itafile yegolide ye-oki eqhotyoshelwe eludongeni iphethe iisinki ezimbini ezimhlophe, nganye enesipili esincinci esixande ngaphezulu. Esi sithuba sibekwe kanye ecaleni kwebhafu encinci ejikelezwe liqonga elimhlophe eliqinileyo. Umgca othe tyaba uphawula eli qonga, kunye neepateni zeentyatyambo eludongeni, i-mahogany blinds, kunye neethayile zemibala ezibeka isipili esikhulu sodonga esikhulisa indawo.
Oku kulandela isikimu sombala ongwevu naluhlaza okwesibhakabhaka esifana negumbi lokulala elinokubonwa ngaphandle kokungena ngaphandle komnyango. Umgangatho ugqunywe ziithayile ezimenyezelayo zamatye, ngokuchaseneyo nodonga oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neethayile zemibala yezitena ezimise isinki kunye nebhafu. Ikhabhathi ye-Wengue ngumdlalo ogqibeleleyo kwi-vibe yamadoda kule ndawo yokuhlambela.
Le ndlu yokuhlambela intle ngesitayile, isitayile esingemva esilungileyo, njengendawo entle yesilivere ebambe ibhafu emhlophe embhoxo, kunye nekalika yesilivere. Elinye igumbi ligutyungelwe kwiithayile ezinombala wekhofi, kunye necandelo elincinci lomgangatho ophethe indawo emhlophe ephakame kancinci yeshawari efakwe ziipaneli zeglasi ezinde. Ukulula kwegumbi kuhlotshiswe ngemigca yegolide e-oakwood egqunywe ziimfama ezithe tye ecaleni kwezityalo ezimbini zokuhombisa.
Le ndlu yangasese imhlophe ngokupheleleyo, kodwa ngobuchule idlala ngobume bokufezekisa isitayile esincinci kunye nenhle. Ibhafu emhlophe emhlophe ijikelezwe ziithayile ezimhlophe ezixande kwisiphelo se-matte. Iindonga ubukhulu becala zimhlophe, ngaphandle kwegrey, i-oatmeal, kunye neethayile ezimhlophe ezingacacanga ezigubungela icandelo leshawa, ezifakwe kwisahlulelo nakwiminyango yeglasi. Ukongeza ubomi kunye nombala, igumbi lokuhlambela lineefestile zeglasi ngaphandle kwamakhethini, ejonge ngaphandle.
Indawo yokuhlambela ebanzi iyahlaziya ngokuthintela okuluhlaza kumakhethini, iikhabhathi zelnut kunye nezinye izityalo zokuhombisa. Umgangatho ugqunywe ziithayile ze-oatmeal, ezifanayo kwiqonga lamanqanaba amabini akhokelela ebhafini embindini wegumbi, kanye ecaleni kwefestile. I-symmetry ibonakala kwiikhabhathi ezimbini zelnut ngapha nangapha kwebhafu, enezibuko ezibekwe eludongeni kanye ecaleni kwayo, kunye neepateni zoxande eludongeni kubume obumnyama obumnyama.
Le ndlu yokuhlambela ibeka ugxininiso kwibhafu elele embindini wegumbi. Into enomdla kukuba akukho khabhathi, izitulo zokuphumla, okanye izibuko ezinokufunyanwa, ngaphandle kwezityalo zokuhombisa ngaphakathi nangaphandle kwegumbi, njengoko kubonwe kwiminyango yeglasi. Iindonga zimhlophe ngokuqinileyo kwikona enye, ngelixa udonga olumdaka ngombala lunokufunyanwa kwelinye icala. Umgangatho u-matte kwaye uthanjisiwe ngombala weplanga kumbala ohlanjiweyo.
Le ndlu yokuhlambela imdaka ayinazinto zokuhombisa, kodwa ityebile ekwakhiweni. Iikhabhathi ze-mahogany zikwicala lasekhohlo, kunye nomphambili wamatye omdaka kunye nesipili esinokuba yindawo elungileyo yokwenza irejimeni yobuhle okanye yokuthambisa. Igumbi lokuhlambela lahlulwe kulo lonke igumbi elinesahlulo esisiqingatha, iiphaneli zeglasi, kunye neengcango. Umgangatho wayo we-oatmeal we-tiles uhambelana neethayile ezijikeleze ibhafu, ngelixa umgangatho ugqunywe ngetayimane ngombala. Olunye udonga lugqunywe ngombala omdaka we-mocha.
Eyona nto inomtsalane kule ndawo yokuhlambela yindawo yokuhlambela ejikelezwe ziithayile zesilivere, njengebhola yedisco. Oku kuphuma kwizinto ezincinci ezisetyenziswa kwigumbi lokuhlambela, njengokwahlulahlula iglasi eluhlaza, ikhabethe ye-oki, kunye ne-oatmeal floor kunye neetafile. Igumbi lokuhlambela lahlulwe langamacandelo, iikhabhathi kunye nesinki ngasekhohlo, indlu yangasese ecaleni kwayo, kunye nebhafu negumbi lokuhlambela kwelinye icala.
Le ndlu yokuhlambela isebenzisa imibala eqinileyo kunye nemiphetho engenamthungo ukwenza indawo yanamhlanje, ityhubhu imhlophe ngokuqinileyo, ngelixa isitulo esincinci esimfusa esifana nomhombiso omfusa sinokufunyanwa kwelinye icala. Iilaminates ezenziwe ngombala ongwevu zigubungela i-flooring, iikhabhathi, kunye neendonga, ezisikwe zizipili. Kwicandelo lesinki, kanye ngasemva kwekhabhathi engwevu evelileyo, udonga olubunjiweyo olumhlophe luphuma ngokukhanya okukhokelwayo ngaphantsi kwalo.
Indawo yokuhlambela yelizwe ifumana ubuhle bayo kulingano kunye neepateni. Ibhafu yokuhlanjwa yoxande ilele embindini wegumbi, kanye ecaleni kwefestile eseludongeni. Amacala ebhabhu yimigca eneplanga yomthi we-walnut, umdlalo kwikhabhathi elele macala omabini, ngalinye liphethe isinki emhlophe kwitafile emdaka ecaleni kwesipili. Iindonga zekhofi ezimdaka zihonjiswe ngeepateni ezilula zesikwere, umdlalo olungileyo kwiiphaneli kwikhabhinethi.
Le ndlu yokuhlambela intle ngumxube wale mihla kunye nelizwe. Iithayile ezimhlophe ezimenyezelayo zigubungela umgangatho kunye namacala eplatifomu, ngelixa ilitye eliluhlaza eliluhlaza lilayini yomgangatho ophezu kwetafile kwaye lijikeleze ibhafu. Udonga olunzulu lomnquma oluhlaza lubambe isiqwenga sesinyithi esinika i-vibe yanamhlanje kwigumbi, ngelixa izityalo zokuhombisa kunye nekhabhathi enzulu yelinathi kulapho ilizwe liviwa khona.
Le ndawo yokuhlambela encinci yanamhlanje idlala ngombala omdaka, ubungakanani, kunye nokulungelelana okunika igumbi ubuhle bayo. Umgangatho ugqunywe ziithayile zelitye zedayimani ezimdaka ngebala, ngelixa iindonga zigutyungelwe ngokupheleleyo ziithayile zamatye eziziingxande ezikwimbonakalo efanayo nombala. Ubume obufanayo kunye nombala weethayile zisetyenziselwa ukuhambisa macala ebhafini, kodwa ngeli xesha ngokusikwa okuncinci kweethayile ezixande, zigudle ngokuthe nkqo kwaye zibekwe ngokusondeleyo njengeetayile ze-mosaic. Ihanger enkulu emhlophe yetawuli ilele ngaphaya kwesinki emhlophe eluxande emhlophe kunye nekhabhathi emhlophe eqinileyo engenamthungo ngaphantsi kwayo.
Eli gumbi lokuhlambela libanzi linamaphaneli efestile aliqela avalwe ngeemfama ezimhlophe ezihambelana nebhafu emhlophe ezantsi kwayo. Ibhafu ilele ngaphakathi kweqonga elinamanqanaba amabini abalekayo egumbini, kwaye liqhubeka njengeqonga elinokusebenza njengendawo yokuhlala kwigumbi lokuhlambela. Eli qonga lijikelezwe ziithayile zesikwere se-matte oatmeal, ngombala ofanayo kwiithayile zomgangatho, kodwa zibekwa zaza zahluka-hlukanisa ukwenza ubume. Iphaneli enkulu yeglasi egubungela igumbi lokuhlambela esiphelweni sale ndawo yokuhlambela.
Le ndlu yokuhlambela inde kwaye iphangaleleyo inamacwecwe e-mahogany angenacala ngaphandle kwelinye icala, umdlalo kwiipaneli ze-mahogany kwicala lesityhubhu, zombini zibambe ilitye le-oatmeal eliqinileyo elijikeleze ibhafu kunye nesinki. Isibuko esikhulu seglasi siyasebenza kwaye senza ukubeka phezulu okanye irejimeni yansuku zonke umsebenzi olula, kanye ngaphezulu kwesinki. Kwelinye icala, igumbi lokuhlambela elide lahlulwe laya kwelinye igumbi lineepaneli ezinkulu zeglasi. Ngaphakathi, kungabonakala ishelufu yelitye elivelileyo, enika indawo yokuhlala xa uhlamba. Ukulinganisa ibala elimdaka kunye nelimhlophe egumbini, ikhaphethi yesikwere engwevu igubungela inxenye yomgangatho, kwaye iqinisekisa ukuba yonke indawo yokuhlambela inokugcinwa yomile emanzini anokuntywila esityeni esiqabulayo kwishawari okanye ibhafu.
Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela azihlali zifuna ukuya ngaphezulu nangaphezulu. Le ndlu yokuhlambela intle kodwa intle. Ngokungafaniyo nendawo ezininzi zokuhlambela, licandelo leshawa elilele phakathi kwekhabhathi emhlophe efanayo, isinki kunye nesipili. Icandelo lokuhlamba liphakanyisiwe kwaye lifakwe kwiipaneli ezinkulu zeglasi. Kwicala elichaseneyo, layini udonga, umahluko olungileyo kwibhafu emhlophe yesikwere emhlophe elele ngqo ngezantsi kwekhandlela elihle nelomhle. Iindonga ezingwevu kunye neethayile zedayimani emdaka zodaka zongeza umahluko kwimibala emhlophe kakhulu kunye nemhlophe ejikeleze igumbi.
Uyilo lwegumbi lokuhlambela Icandelo 2 - Uyilo oluMnyama oluMhlophe kunye noMhlophe - Iingcamango ezi-25 ezintle zeGumbi lokuhlambela - Iingcamango Zangasese Eziqhelekileyo
izimvo zepeninsula yasekhitshini
Izimvo ezingama-36 zokuzalwa kwakhe
Thetha ngoku okanye unaphakade ubambe uxolo okanye isiqwenga
iingoma zokungena emtshatweni
umdala kangakanani umfazi kamongameli ixilongo